Master Lu na -enyocha Sọpụrụ 20, ọkọlọtọ ọzọ nke ika | Androidsis
Nna-ukwu Lu na-atụle Honor 20, ọkwa na-esote nke ika ahụ
Mgbe Huawei wepụtara nnukwu egbe ya maka ọkara nke mbụ nke 2019, nke bụ P30, ọ bụ oge nsọpụrụ ka ọ bụrụ ebe etiti anya, ya mere ka ọ bụrụ ntakịrị oge.
El ufọt ufọt Sọpụrụnụ 20i mara ọkwa ụbọchị ole na ole gara aga, ma ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ na-akwadebe maka mwepụta nke ụdị ọkọlọtọ ya, nke ga-abụ Na-asọpụrụ 20. Nke a agafeela ugbu a na Master Lu, akara ngosi China, ma gosipụta ya dị ka ọnụ arụmọrụ dị elu.
Dị ka anyị kwuru, a hụrụ Honor 20 na ikpo okwu Master Lu. Ndepụta a akọwapụtara n'okpuru koodu aha «YAL-AL00». Nke a na - akwado ụfọdụ njirimara na njirimara teknụzụ nke ngwaọrụ dị ike.
Ihe mbụ ọ na-ekpughe bụ na Huawei kwadoro flagship, nke HiSilicon Kirin 980 7 nm na cores asatọ, ma dakọtara na 8 GB nke RAM. Ọzọkwa, a na-ekwu na mkpebi ihuenyo bụ FullHD + nke pikselụ 2,340 x 1,080, na-egosi na ọ dị akụkụ 19.5: 9. Ọ bụrụ n’icheta, ọbụnadị Honor 20i ji otu mkpebi ahụ bịa.
Kwa se, ihe nlere anya jisiri ike nweta akara nke 338,924 na benchmark index, nke na-etinye ya na ngalaba dị elu ma na-agwa anyị ọtụtụ ihe banyere arụmọrụ ọ ga-eweta yana arụmọrụ ọ ga-enweta n'aka gị, ozugbo enwere ya.
N'ikpeazụ, ọ bara uru ikwu nke ahụ the Honor 20 ga-abụ ngwaọrụ dị oke mkpa na atụmatụ egwuregwu nke ika ahụ na 2019. Honor na Huawei bu n'uche ịbụ ndị na-eduzi ama ama na njedebe na afọ a. ọ bụ ezie na nsọpụrụ, dị ka ndị dị otú a, dị anya site na ya. Huawei, maka akụkụ ya, dị ezigbo nso iji nweta ya; Ugbu a ọ bụ nke abụọ kachasị na-arụpụta ekwentị, n'azụ naanị South Korea Samsung.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nna-ukwu Lu na-atụle Honor 20, ọkwa na-esote nke ika ahụ
E gosiputara akara AnTuTu na Lenovo Z6 Pro